पछि फेरि फर्किने गरि कैदीलाई घर पठाउन प्रस्ताव ! – Namaste Dainik
August 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on पछि फेरि फर्किने गरि कैदीलाई घर पठाउन प्रस्ताव !
१४ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले पछि फर्किने सम्झौता गरेर जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई घर पठाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पछिल्लो समय कैदी र बन्दीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेपछि संंसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट बैठक राखी छलफल गरेको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरुले जेलमा क्षमता भन्दा धेरै कैदी बन्दी रहेको भन्दै कैद छुट गर्न मिल्नेको छुट गर्न र अन्यलाई पछि फर्काउन मिल्ने गरी घर पठाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नवराज सिलवालले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, गम्भीर प्रकृतिका मुद्धाका बाहेक अन्य मुद्धाका दोषीलाई कैद छुट दिन प्रस्ताव गरे । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका (नेकपा) का सांसद लालबाबु पण्डितले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकालाई बाँकी सजाय छुट दिने र अन्यलाई पछि फर्किने करार गरेर पठाउन सकिने बताए ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले कैद छुट दिन कानुन बाधक भए फुकाउनुपर्ने बताइन् । ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार पेरोलमा जाने र थप नीति र मापदण्ड बनाएर उनीहरुलाई छोड्न सकिन्छ’ उनले भनिन् । नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कैद छुट गर्न आग्रह गरिन् । राज्यले चाह्यो भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पनि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीहरुलाई रिहाइ गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न सन्र्दभमा माफी मिनाहा गर्ने गरेका छौं । यो समयमा पनि रिहाइ गर्न सकिन्छ ।’
सांसदहरुले कोरोना संक्रमित कैदी बन्दीलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कानुनले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदी बन्दीलाई छोडिहाल्न नसकिने बताए । तर, विभिन्न सन्दर्भ पारेर दिइने छुटका विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘हाल देशभर २४ हजार १६३ कैदीहरु छन् । कारगारको क्षमता १६ हजार जनाको हो’ उनले भने, ‘यो संख्या कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रयास गरिराखेका छौं । असोज ३ (संविधान दिवस) गते आउँदै छ त्यसको तयारी गर्दैछौं ।’महानिर्देशक पोखरेलले कोरोना संक्रमित कैदी बन्दीलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
बैठकको सुरुमै धारणा राखेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले ब्यारेक र जेलमा कोरोना बढेको चिन्ता व्यक्त गरे । कैदीबन्दीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुमा बढ्दै गएको संक्रमणले चिन्ता बढाएको भएपनि सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।